“Waxaan sameyn doonaa wax walba si aan xirfadeyda ugu soo gabagabeeyo Stamford Bridge.” – Xiddig hore Chelsea ah – Gool FM
(London) 06 Maarso 2021. Xiddig hore kooxda Chelsea ah, ayaa ku riyoonaya inuu ku laabto Blues si uu u soo gabagabeeyo xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta halkaas.
Oscar ayaa ka tagay Chelsea sanadkii 2017 si uu ugu dhaqaaqo kooxda Shanghai Port ee dalka Shiinaha, aduun dhan 70 milyan euro, taasoo ka dhigtay inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan adduunka.
Haddaba Oscar ayaa wali ku riyoonaya inuu ku laabto garoonka Stamford Bridge, maadaama uu horey ugu guuleystay tartamo ay ka mid yihiin Premier League, iyo Carabao Cup.
Si kastaba ha ahaatee xiddiga reer Brazil ee Oscar ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan ka fekerayaa inaan mustaqbalkeyga ciyaareed ku soo gabagabeeyo Chelsea, sababtoo ah waxaan ku qaatay waqtiyo aad u wanaagsan, waxay iga caawiyeen inbadan inaan homar sameeyo, isla markaana aan ku guuleysto wixii aan waligey ku riyoon jiray, oo ah inaan ka ciyaaro Champions League, taas ayaa ah tan igu kaliftay inaan ciyaaro Koobka Adduunka iyo sidoo kale inaan ku guuleysto Premier League.”
Ciyaaryahankan, oo qandaraaskiisa kooxdiisii ​​Shiinaha uu dhacayo bisha November 2024, wuxuu intaas ku daray:
“Waxaan saaxiibo badan ku leeyahay Chelsea, haddii aan fursad u heli lahaa inaan ku soo gabagabeeyo xirfadeyda ciyaareed halkaas, waxay ii noqon laheyd riyo, Chelsea inta badan ma soo iibsato ciyaartoyda da’ada ah, taasina waa wax iska caadi ah, sababtoo ah waa koox weyn oo ka dhisan Yurub, laakiin waxaan sameyn doonaa wax walba oo suuragal ah si aan taam u noqdo oo aan xirfadeyda ugu soo afjaro halkaas.”